Åkesson oo ugu baaqey taageeroyaashiisa in ay codeeyaan dhamaan doorashooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Åkesson oo ugu baaqey taageeroyaashiisa in ay codeeyaan dhamaan doorashooyinka
La daabacay måndag 26 augusti 2013 kl 10.42
Maalinkii sabtida uu qabtey hogaamiyaha SD Jimmie Åkesson qodbadiisa xagaaga ayuu ugu baaqeyn dhamaan taageeroyaasha xisbiga in ay codeeyaan dhamaan doorashooyinka soo socda oo dalka ka dhici doona, xataa doorashada kaniisada oo dhici doonta asbuucyada soo socda.
- Sadex asbuc ee soo socota waxeynu bilaabeynaa howl aynu uga bixineyno kaniisada aabayaasheen gacmaha kalo dirayaasha bulshada oo aan sidoo kale ku badeleyno adinka salaada muslimiinta cod macaan oo ka yimaada kaniisada. Waxaan dhamaantiin idiin kugu baaqayaa kuwiina xaqa u leh in ay codeeyaan, saaxiibna la ah Iswiidhen in aad u dareertiin meelaha laga codeynayo 15 bisha september, ayuu qobadiisa ku yeri Jimmie Åkesson.
Sida uu yeri Jimmie Åkesson kaniisada Iswiidhen waxey ka fogaatey diinta masiixiga waxeyna gacanta ay u gashey dadyowga socialistiga iyo liberaliga ah. Kooxdan ayuu ku tilmaameyn kuwo monobool ku heysta waxa saxda iyo qaladka ah.
- Caqabada waxey tahay sida aan u qeexeyno waxa runta iyo xaqiiqda ah, sida sharaxaada aan ka dhiibeyno Iswiidhen ay u noqon laheyd mida guud oo aan u noqon laheyn kuwo agenda dejiya.
Jimmie Åkesson ayaa doonaya in uu kula tartamo xisbiyada soo jiidasheda dadyowga uu soo galo dakhliga hoose-dhexe.
- Waan in aan soo jeedno tusaale codbixiyaasha miyiga, kuwo shaqada ka fariistey anaga oo dhimeyno canshuurta laga qaado una kordhineyna gonooyinka, ayuu yeri.